अमेरिकी अभिनेत्री Vanessa Marcil
Vanessa Marcil - "जनरल अस्पताल," "बेवर्ली हिल्स 90210" र "लस भेगास" जस्ता चलचित्रहरू मा शूटिंग पछि ठूलो लोकप्रियता प्राप्त गर्ने अमेरिकी अभिनेत्री। त्यो छैन धेरै पूर्ण-लम्बाइको फिलिमहरु छ, तर यो सिनेमा यसको merits देखि कम छैन।
Vanessa Marcil। जीवनी
Vanessa Indio (क्यालिफोर्निया) मा अक्टोबर 5, 1968 जन्म भएको थियो। मूल अमेरिकी - vanessa त्यो एक मेक्सिकन बुबा र आमा छ, चार छोराछोरीमध्ये कान्छो छ।
Vanessa अमेरिकी अभिनेता गर्न विवाह भएको थियो Kori Feldmanom, सबै को सबै भन्दा, वैवाहिक दर्ता भएको थियो त्यो फिल्म "द Goonies," "Windswept लागि जानिन्छ" र नरक को छ स्तर। "अगस्ट 6, 1989. तर जोडे, 14 वर्ष पछि अप भङ्ग 2003 मा, तिनीहरूले आधिकारिक छोडपत्र ।
1995 मा vanessa Marcil, अमेरिकी अभिनेता नाथन Fillion, को फिलिमहरु "महल" र आफ्नो भूमिकाको लागि जानिन्छ जो डेटिङ सुरु "Buffy -। यो कातिलों" तर आफ्नो सम्बन्ध, लामो पछिल्लो थिएन 1997 मा जोडे विभाजित।
1999 देखि, Vanessa सँगै तिनीहरूले "बेवर्ली हिल्स 90210" मा तारा अङ्कित, अमेरिकी अभिनेता ब्रायन Greene सम्बन्ध थियो। 2002 मा, जोडी नाम थियो Cassius Lidge Marcil-हरियो एक छोरा थिए। तर बच्चा सम्बन्ध राख्न मदत गर्नुभयो, र 2003 मा पूर्व प्रेमीहरूको parted।
2010 मा, अभिनेत्री को दोकान Carmine Dzhovinazzo आफ्नो सहकर्मी संग विवाह प्ले। जोडी आफ्नो सम्बन्ध प्रभावित जो वर्ष Vanessa दुई गर्भपात रूपमा धेरै भयो, लागि, कुनै बालबच्चा थिएन। र मार्च 2013 मा जोडी आफ्नो वैवाहिक बर्खास्त।
48 मा, Vanessa Marcil जसको वृद्धि र वजन 163 सेमी र 50 किलो छन्, क्रमशः, उत्कृष्ट आकारमा छ।
यो टिभी श्रृंखला "जनरल अस्पताल" मा एक ब्रान्ड को भूमिका मा लिए 1992 अघि, त्यो विभिन्न थिएटर निर्माण मा सक्रिय भाग।
Vanessa Marcil। सिनेमा
1992 देखि 1998 को लागि, 2000 मा र 2002 देखि 2003 र त्यसपछि 2010 देखि 2011 को लागि, Vanessa श्रृंखला "जनरल अस्पताल", "एमी" मा तीन नामांकन प्राप्त गरेको छ जसमा सहभागिता र श्रेणी मा पुरस्कार "उत्कृष्ट प्रदर्शन मा तारा अङ्कित 2003 मा vtoroplanovyh अभिनेत्री "।
1996 मा, त्यो टिभी श्रृंखला "माया, सम्मान धोखा" मा र चलचित्र "द रक" मा तारा अङ्कित।
1997 मा, यो शो "असम्भाव्य घटना" र फिलिम मा Kerri Endryus को भूमिका मा देख्न सकिन्छ "एक इच्छा गर्नुहोस्।"
1998 देखि 2000 त्यो प्रशंसित seryl "बेवर्ली हिल्स 90210" को 37 एपिसोड मा तारा अङ्कित।
देर 90 का र शून्य वर्ष को शुरुवात मा। Vanessa धेरै अधिक चलचित्रहरू र टेलिभिजन श्रृंखला को फिलिम मा भाग छ। साँचो, तिनीहरूलाई को धेरै हेर्दै सार्वजनिक बीच कारण पहिचान र लोकप्रियता प्राप्त गरेको छैन।
2003 देखि 2008 उहाँले टिभी श्रृंखला "लस भेगास" मा र धेरै अन्य टेलिभिजन श्रृंखला मा तारा अङ्कित छ।
2008 मा, त्यो केवल एक श्रृंखला, भनिन्छ जो "लिपस्टिक जंगल" मा तारा अङ्कित। ठूलो सफलता उहाँले अभिनेत्री ल्याएको छ।
अर्को, 2009 मा, यसलाई Vanessa Marcil धेरै व्यस्त, त्यो यस्तो, "एक तातो गर्मी" र "एक ट्रेस बिना" "को नर्स देखि एक्सप्रेस" को रूपमा तीन श्रृंखला को शूटिंग मा भाग गरियो।
2010 मा, सिरियल फिलिम "जनरल अस्पताल" मा फिलिम साथै उहाँले भाग फिल्म "बाटो Bannena" मा लगे।
सबै ब्रान्ड बैरेट multiserial परियोजना मा उनको भूमिका को लागि आफ्नो पुरस्कार अभिनेत्री प्राप्त "जनरल अस्पताल।"
1997 मा उहाँले देखि "सबैभन्दा बलिरहेको अभिनेत्री" को शीर्षक प्राप्त "धारावाहिक डाइजेस्ट पुरस्कार।"
1998 मा उनले श्रेणी मा नै फिलिम पुरस्कार को एक पुरस्कार प्राप्त "उत्कृष्ट प्रदर्शन मुख्य महिला भूमिका द्वारा।"
2003 मा उहाँले "सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री vtoroplanovuyu" को लागि "एमी" सम्मानित गरिएको थियो।
त्यसै वर्ष मा, त्यो श्रेणी मा यो फिलिम पुरस्कार अर्को पुरस्कार प्राप्त "को भूमिका गर्न brightest फिर्ती।"
Vanessa Marcil सर्वश्रेष्ठ विभिन्न टेलिभिजन श्रृंखला मा आफ्नो भूमिकाको लागि ज्ञात छ, र उनको पुरस्कार को लगभग सबै एक श्रृंखला को शूटिंग मा सहभागिता को लागि प्राप्त गरेका थिए। 48 मा, त्यो 43, फिलिम, जो श्रृंखला को सबै भन्दा मा शूटिंग मा काम गरे।
मेक्सिकन, अमेरिकी, फ्रान्सेली, पोर्चुगिज र इटालियन जरा जोडती यस भव्य अभिनेत्री, एक बरु charismatic तरिका छ। यो अक्सर एक फिलिम वा टिभी श्रृंखला, तारा अङ्कित जो एक jewel छ। उनको रचनात्मक गतिविधि मा जसको ब्याज उनको प्रेम को छवि धेरै मानिसहरूले alluring लागि एकदम उच्च छ। र चासो संग मिडिया दर्शक पनि अभिनेत्री को क्यारियर र व्यक्तिगत जीवन पालन गर्न सुरु गरिएको छ।
आज Vanessa Marcil चलचित्रहरू र धारावाहिक मा कार्य जारी छ। यो प्रस्ताव छ जसमा सहभागिता सबै परियोजनाहरू लागि लगभग लिइएको छ। दुर्भाग्यवश, यो अभिनेत्री को काम को लागि kinodela माग त ठूलो छ, तर शायद उहाँले निकट भविष्यमा एकदम वृद्धि हुनेछ।
एन्ड्रयू Chadov: Filmography, व्यक्तिगत जीवन
कालो कमेडी "द्वैध": अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र, सारांश
2013 मा गाउँमा बारेमा Melodrama
सबै समय को सबै भन्दा राम्रो रोमान्स: चलचित्र र टिभी श्रृंखला को सूची
"Pokémon: इन्डिगो लिग।" पहिलो सिजन को षड्यन्त्र
Matcha - स्वाद र शैली को connoisseurs का लागि चिया
क्लाऊस Mayklson - अभिनेता: तस्बिर, जीवनी, Filmography
महिला सुत्दा बच्चा देखे, किन पर्खनु?
सर्बिया, समुद्र मा बाँकी: संयुक्त पर्यटन
फिर्ता दुखाइ: के डाक्टर यो समस्या संग जान?
सामाजिक प्रभाव: यो के हो र तपाईँले गर्नुपर्ने किन?
कसरी ठोस को चिसो प्रतिरोध छ
कसरी आयोग बिना बीलाईन ब्यालेन्स Refill गर्न?
सानो बच्चाहरु को लागि मिनी माइक्रो स्कूटर